Ukuxhotyiswa ngamanqaku aMandla eGoogle | Martech Zone
Ukuxhotyiswa ngamanqaku aMandla eGoogle
NgoLwesine, uJanuwari 7, 2010 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 UAdam Omncinci
Bendikhe kusetyenziswa Amandla kaGoogle ngoku iinyanga eziliqela. Ukuqala kwam ukuva nge-Wave, ndacinga ukuba iyavakala ngathi inokuba inomdla. Ndijonge i ividiyo emide kakhulu malunga nesixhobo kwaye woyiswa ngamandla kunye nokubanakho kwento ebonakala ngathi ilindele inguquko kunxibelelwano lwe-Intanethi.
Emva kokucela isimemo kwaye ekugqibeleni ndifumana ukufikelela kwinkonzo ndiye ndacotha kancinci ukuqala ndithatha unxibelelwano nabanye abahlobo kunye nabalingane nabo abanofikelelo Amandla kaGoogle. Kwisixhobo sonxibelelwano, yenza ukuba kungabikho luncedo kakhulu ukuba awukwazi ukuthetha nabantu osebenzisana nabo rhoqo yonke imihla.
Amandla kaGoogle uthembisa ukubonelela ngamathuba okulungiselela imisitho, ukwabelana ngonxibelelwano kunye namaxwebhu asasazwe ngokulinganayo. Unokwabelana ngeefoto, izimvo, iividiyo, amanqaku, amaxwebhu, kunye nemidlalo yonke kwiqonga elinye ngaphakathi kwefestile esele ikho.
Inyani yile andikabi nalo uguquko lokwenyani kunxibelelwano lwam. Olona hlobo lusebenzisiweyo ndilibonileyo Amandla kaGoogle yintsebenziswano endiyenzileyo nomhlobo wam obhalela enye yeebhloko zam. Sabelana ngeenjongo, izimvo, imibuzo kunye nezicwangciso kunye nomnye kwi-Wave kwaye isebenza kakuhle.
Ndisalinde ukuba isuswe nyani. Ndicinga ukuba indlela abanokubeka ngayo ukusetyenziswa kwi-overdrive iya kuba kukutshintsha into esele ikhona inbox ukusebenza kunye Amandla kaGoogle. Owu, kwaye ngelixa bekhona, faka nje Uphando Amaxwebhu kwaye Uphando Ncokola apho ngokunjalo. Mhlawumbi nokufefa Amaqela eGoogle Ukuqhubela phambili ngokunjalo.
Ndisacinga njalo Amandla kaGoogle iya kuguqula unxibelelwano kwi-Intanethi. Andiqondi ukuba izakwenzeka de kube kubanzi nesiseko somsebenzisi esikwaziyo ukufikelela eqongeni kunye nokunye Uphando Iinkonzo ziyabandakanywa okanye ziyapheliswa.
tags: amaza kagoogleGoogle +
UAdam Omncinci yi CEO ye Ummeli weSauce, Iqonga lokuthengisa izindlu nomhlaba elipheleleyo elizenzekelayo, elidityaniswe ne-imeyile ngqo, i-imeyile, iSMS, ii -apps eziselfowuni, imidiya yoluntu, iCRM kunye neMLS.
Ungayihambisa njani iBhlog yakho kwaye ugcine uMzobo woKhangelo
Ayizizo zonke iingcali ze-SEO ezidalwe zalingana
Jan 7, 2010 kwi-11: 47 AM
Jason, usandula ukushwankathela kwimihlathi embalwa emifutshane, kanye le nto ndiyivayo malunga neGoogle Wave. Ndandifuna ngokwenene ukuba iyiguqule ngokupheleleyo indlela endisebenza ngayo, kodwa ndashiyeka ndiziva ndiphantsi kakhulu.
NgoJanuwari 7, 2010 ngo-8:09 PM
Jason, iposti enkulu! Ukubhenca abaphulaphuli apha kwitekhnoloji yokwenyani kunye nokusetyenziswa kweblogger ye-Wave kwakukudala kudlule. Enkosi!
NgoJanuwari 7, 2010 ngo-9:59 PM
Jason, andizange ndivume ngakumbi.